FALANQEYN:- Yaa ka dambeeyay in Kenya ay islaheysiiso qeybta Badda Soomaaliya (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
FALANQEYN:- Yaa ka dambeeyay in Kenya ay islaheysiiso qeybta Badda Soomaaliya (AKHRISO)
Inkastoo ay maanta maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka magaalada Hague ee dalka Holland ka bilaabatay dacwadii Badda ahayd ee u dhaxeeysay Soomaaliya iyo Kenya ayaa hadane arrinkaasi waxaa la iska weydiin karaa cidda sida rasmiga ah markii horeba muranka u gelisay lahaanshiyaha baddeena Soomaaliya.
Dacwadaan ayaa sida la sheegay salka ku heysa heshiis ay dowladii KMG ahayd ee Soomaaliya la gashay Kenya oo is- afgarad ahaa, wuxuuna heshiiskaasi dhigayay inaan wax dacwad ah lagu qaadin muranka ku saabsan xuduuda Badda ee u dhaxeeysa Kenya iyo Soomaaliya, balse si wadahadal ah arrinkaasi lagu dhameeyo.
Sidoo kale, heshiiskaasi ay kala saxiixdeen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa ah mid loo aaneynayo inuu jidka u furay inay muran gasho lahaanshaha Badda Soomaaliyeed qeybta xuduudka u dhaxeeysa labadaasi dal, waxaana heshiiskaasi Soomaaliya u saxiixay C/raxmaan C/shakuur Warsame oo xilligaasi ahaa wasiirka qorsheynta dowladdii KMG ahayd ee Soomaaliya.
Dhinaca kale, C/raxmaan C/shakuur ayaa markii uu saxiixay heshiiska kadib, waxaa dusha loo saaray inuu Baddii Soomaaliyeed u saxiixay Kenya, laakiin wuxuu isaguna sheegay inuu ahaa wasiir oo amar dowladeed uu saxiixaasi ku galay, islamarkaana uu amray Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, kuna tilmaamay saxiixaasi inuu ahaa go’aan xukuumadeed iyo mas’uuliyad wadareed aan isaga loo raacan karin.
Ugu dambeyntii, baarlamaankii KMG ahaa ee Soomaaliya oo xilligaasi jiray ayaa laalay heshiiska ay kala saxiixdeen Kenya iyo Soomaaliya, waxaana xilligaasi wixii ka dambeeyay iska muuqata inay Kenya ka hari la’ dahay arrintaan oo saxiixii heshiiskaasi uu u noqday mid ay ku dooddo.